Ukugqithiswa yixesha eliqhelekileyo kwiifowuni kunye neengcali zembali kwenkqubo apho izandi ezimbini ezizondelene nazo ziba ngaphantsi. Ukwahlukana nokufana . Ngokutsho kukaPatrick Bye, igama lokungathembeki "langena kwintsimi [ yefowuni ] ngekhulu le-19 ukusuka kwi- rhetoric , apho yayisetyenziselwa ukuchaza ukuhluka kwendlela efunekayo yokuthetha koluntu oluhle" (i -Blackwell Companion kwi-Phones , 2011) .
Njengoko kuchazwe ngezantsi, uhlobo oluthile lokungafihlisi luhlobo lwe- haplology -sitshintsho somsindo olubandakanya ukulahlekelwa kwesilayidi xa kulandelelwano lwesalathisi (okanye efanayo). Mhlawumbi umzekelo owaziwayo kukunciphisa i- Anglaland kwi- Old English ukuya eNgilandi ngesiNgesi yangoku . I-Haplology ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi syllabic syncope . (Umlingani we- haplology ngokubhaliweyo yi- haplography- ukungaphumeleli ngokukhawuleza kwileta ekufuneka iphindwe kwakhona, njengokungaphambuki kweefospell .)
Icandelo kunye noPhakamileyo
Ukuthi igama elithi "uFebruwari" lichanekileyo?
"[Umzekelo] wokungathembeki kukuchazwa ngokungaqhelekanga kwesimboli njenge- chimley , kunye neyesibini kwimizuzu emibili yashintsha ibe ngu- [l]. Ukugqithiseka okugqithiseleyo kukulahlekelwa ngokupheleleyo kwesandi esisodwa ngenxa yokusondela kwesinye isandi esifanayo. Umzekelo kwinqanaba eliqhelekileyo leentsuku zesiNgesi ukushiywa kwesinye sezivakalisi ezimbini ukusuka kumagama afana nekate (r) insika, iCante (r) ingcwaba, i-rese (r) ibona, i-rally, i-south (r) ner , i-barbitu (r) idle, i-gove (r) okanye, kwaye i- r (r) ibalulekileyo . "
(UJohn Algeo noTomas Pyles, Isiqalo nokuPhuhliswa koLwimi lwesiNgesi , ngo-5 uThomson, 2005)
Ukungabikho kweziTywala zeTywala
"Cinga [umzekelo] wokungabikho kwezikhonkwane zamanzi eziye zenzeka xa isisombululo- siqhotyoshelwe kwezinye izibizo zesiLatini ukwenza izichasti . Inkqubo yokuluthwa rhoqo isinika amabini afana nalawa alandelayo: i- orbit / orbital, umntu / umntu, inkcubeko / kodwa , xa i / l / ilandelwa ukuphela naphi na kwi ingcambu , ukuphela kuguqulwa ukusuka--a-kuba ngenxa yokungafihli: enye / yodwa, imodyuli / imodular, i-luna / inyanga . " (UKristin Denham kunye no-Anne Lobeck, iiLwimi kwaBantu bonke.Wadsworth, 2010)
Ukubambisana v. Ukungabikho
"Ukufana kufana nokugqithiseleyo; ukufana kufana nokuqhelekileyo, ngokubanzi kulwimi, nangona ngamanye amaxesha kunokuba lube yinto engaphantsi. kumgama (akusiyo kufuphi) .. "(uLyle Campbell, uLwimi lweeLwimi: Isingeniso .I-Press ye-MIT, 2004)
Izizathu kunye neempembelelo zeHholoji
"Sitsho ukuba ukufana kunye nokungafihlakeleyo kukho utshintsho olubangele ukwanda okanye ukuncipha, ngokulandelanayo, kwinqanaba lokufanisana kwefowuni phakathi kwamacandelo amabini. Kuzama ukucinga ukuba utshintsho olunjalo kwicandelo elinye lubangelwa ngolo hlobo lwefowuni enye, kwaye kwizizukulwana ngokwenene ukuba le nto iboniswe njani ... Kodwa oku kudideka kwesizathu kunye nempembelelo. Inyaniso ukuba impembelelo yenguqu yenyuka-ntengo / ukunciphisa ukufana phakathi kwamacandelo amabini, kodwa ucela umbuzo (ukuba uthethe ubuncinci) ukucinga ukuba iqondo lokufana nalo lusetyenziswa ngandlela-thile nanjengobangela wokutshintshwa. Inyaniso yinto encinane kakhulu eyaziwa ngeendlela ezichanekileyo zolu tshintsho, kwindawo eqhelekileyo njengabo. " (Andrew L. Sihler, Umlando weelwimi: Isingeniso . UJohan Benjamins, 2000)
Igama elithi " Haplology ... ligama elinikezelwe utshintsho apho izandi ezilandelelana ngokuphindaphindiweyo zenziwe lula kwiimeko ezifanayo. Ngokomzekelo, ukuba igama elithi haplology lalifanele lifumane i-haplology (kwakufuneka lenze i-haplologized), luza kunciphisa ukulandelana kwelolo khangela , haplology > haplology.Iminye imizekelo yangempela yile:
(1) Ezinye iintlobo zesiNgesi zinciphisa iilayibrari ukuba 'libry' [laibri] kwaye mhlawumbi ukuba 'ingxaki' [prɔbli].
(2) i- pacifism pacificism (ngokuchaseneyo nengqiqo yam, apho ukulandelelana ngokuphindaphindiweyo kungancinci kwaye akupheli njengemfihlelo ).
(3) IsiNgesi ngokuthobeka yayithobekile ngexesha likaChaucer, elibizwe ngeelwimi ezintathu, kodwa liye lacuthwa laba ziilwimi ezimbini (kuphela l ) kwiNgesi yesiNgesi. (ULyle Campbell, uLwimi lweeLwimi: Isingeniso , i-2 ye-MIT Press, 2004)
Imiphumo ye-haplology inokuvakala ukuba ivakaliswe ngokungaqhelekanga kwamagama alandelayo: ngoFebhuwari, mhlawumbi, rhoqo , kwaye ngokufanayo .
"Amagama amathala eencwadi kunye neemfuneko , ngokukodwa njengoko zithethwa kwiNgingqi yaseNgilani, zivame ukuvalelwa ngabangaphandle njengemali ekhutshwayo kunye neyomfuneko . Kodwa xa bephinda abuyele amagama, abavakalisi kakuhle, kuba kufuneka kubekho ixesha elide kunye nelo , ngokulandelanayo , ngala mazwi. Kubonisa ukuba abantu basemzini baqaphela izigaba zokuqala ze- haplology kula mazwi, xa kungekho nhlobo ye-haplology epheleleyo. " (Yuen Ren Chao, uLwimi kunye neeNkqubo eziMpawu . IChamridge University Press, 1968)
Ukusebenzisa i-Flashback ekubhaliseni
Yintoni Eyayikhiphelayo Iliso?
La magama ayawo achasene nawo
Kutheni kunye nendlela yokubuyisela kwakhona iifowuni zefowuni
17 I-Pop Best Song Ingoma Ka-2014
Yintoni eyenziwe ngeSUP?
Indawo yaseMpuma (iGreenland)
Iiprogram eziPhambili zeNtombi ezixhalabele ukhuseleko kunye noKhuseleko
Ukuqonda Imvula eneConvectional
Ngubani i-Atlas, i-Titano yamaGrisi-yamaRoma?
I-Biography kaHelen Keller
I-Onegai - Imifanekiso yeJapan elula
I-MCAT Inqaku 101
6 Iibhontshi zeebhokhwe ezivela kwiMbali yaseMelika
I-SAT yeSifundo soVavanyo lweSifundo seSpeyin
Ukulawula Ukuziphatha Kwebafundi Ngethuba Lokusuka
Umlilo Omkhulu waseChicago ka-1871